နေအိမ် » Tools များ hack » Gmail ကို Hack Tool ကို 15.4.1 – 100% လွယ်ကူသော Hacking အတွက်2မိနစ် 2018 [နောက်ဆုံး]
Gmail ကို Hack Tool ကို 15.4.1 – 100% လွယ်ကူသော Hacking အတွက်2မိနစ် 2018 [နောက်ဆုံး]
အားဖြင့် Anastasiya Libra | ဇန္နဝါရီလ 3, 2018
Gmail ကို Password ကို Hack Tool ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Google Account ကိုဟက်ကာ tool ကို Google ထုတ်ကုန်များအားလုံးများအတွက်အကောင်းဆုံးဟက်ကာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. အရေးအပါဆုံးလူအပေါင်းတို့အသုံးပြုသူရဲ့လွယ်ကူခြင်းဂျီမေးလ်ဖြစ်ပါသည်. ဂျီမေးလ်အကောင့်သုံးစွဲသူဘီလီယံရှိပါတယ်. Gmail အကောင့်တခုကြော်ငြာ-ထောက်ခံအီးမေးလ်ကို Google ကထောက်ပံ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်၎င်း၏အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်. အသုံးပြုသူက Gmail အပေါ်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်နှင့်လုံခြုံတဲ့အကောင့်ရနိုင်.
Gmail ကို 1st April လတခုတခုအပေါ်မှာဖိတ်ကြားချက်ကို-သာ beta ကိုလွှတ်ပေးရန်အဖြစ်စတင် 2004, ထိုသို့ 7th ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်ယေဘုယျအားဖြင့်အများပြည်သူရရှိနိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည် 2007 သော်လည်းနေဆဲ beta ကိုအဆင့်အတန်းအတွက်အဲဒီအချိန်က. အဆိုပါဝန်ဆောင်မှု 7th ဇူလိုင်လအပေါ် beta ကိုအဆင့်အတန်းကနေအဆင့်မြှင့်ခဲ့သည် 2009 ကို Google Apps ကပ suite ကို၏ကျန်များနှင့်အတူ. အွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်, ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်လူမှုရေးအကောင့်အများကြီးလုပ်.
တစျခါတလိပ်ဖြစ်ပျက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်စကားဝှက်ကိုမေ့သွားတယ်သို့မဟုတ်ကြောင့်သတိရစဉျးစားမရ. ဒီလိုမျိုး, ကျနော်တို့ကိုဒုက္ခနှင့်အချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိသည်. ငါတို့သည်သင်တို့၏ Gmail အကောင့် password ကို recover မှအံ့သြဖွယ်ဖြေရှင်းချက်ရှိသည်အဖြစ်ယခုမူကားစိုးရိမ်မရကြဘူး.
ငါ့ကိုအသင့်စကားဝှက်ကို recover အချို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောနည်းလမ်းများရန်သင့်အားမိတ်ဆက်ပေးကွပါစို့. ဤတွင်ဂျီမေးလ် Password ကို Hack ဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အတော်လေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ. Gmail ကို Password ကို Hack နည်း? Gmail ကို Password ကို Hack ဖို့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အတော်လေးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ. ပထမဦးဆုံးအလမ်းသည် keylogging ဖြစ်ပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့လည်း wifi ပြဿနာရှိသောသူအပေါင်းတို့အဘို့အကောင်းဆုံး wifi password ကို Hacker တစ်ယောက် tool ကိုဖန်တီး. ကြိုးစား wifi password ကိုဟက်ကာ အလကား.
သည် keylogging Method ကိုအားဖြင့် Gmail ကို Password ကို Hack ဖို့ကိုဘယ်လို?
Gmail ကို Hack Tool ကိုများအတွက် keylogging technique ကို key-logger ဟုခေါ်တွင်သေးငယ်တဲ့ဆော့ဖျဝဲ၏အသုံးပြုမှုပါဝင်သည်. အသုံးပြုသူတစ်ဦးပေးထားသောကွန်ပျူတာပေါ်တွင် keylogger တပ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါမှာ, ထိုသို့ကီးဘုတ်ပေါင်း Gmail ပေါ်တွင်အသီးအသီး keystroke ရိုက်ထည့်ဖမ်းလိမ့်မယ်. key-logger software ကိုဖွင့်လက်လှမ်းအခမဲ့သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းဝယ်ယူဘို့များစွာသောမျိုးရှိပါတယ်, မသိမသာပါ၏အမျိုးမျိုးဒီဂရီနှင့်အတူ.
ဥပမာအား Applications ကို
Spyrix အခမဲ့ Keylogger
Black Box Express ကို
ပစ်မှတ်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ keylogger Install.
မြားစှာသောကို PC တွင်, စကားဝှက်ကိုဖွစျလိမျ့မညျ “admin ရဲ့” သို့မဟုတ်ပဲအလွတ်ရလိမ့်မည်.
ထို keylogger ကို install များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းသင်အသုံးပြုနေတဲ့နေသောအစီအစဉ်အပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသည်.
ဒါကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ခလုတျကှကျထူထောင်ခြင်းဒါမှ keylogger ဝန်ဆောင်မှုစတင်ပါ.
ကမျိုးစုံ functions တွေရှိပါတယ်လျှင်သင်စံချိန် keys ကိုမှ software ကို configure လုပ်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါ.
ပစ်မှတ်ကွန်ပျူတာအသုံးချနေစဉ် keylogger ကို run ပါစို့. အဆိုပါ keylogger တွေရဲ့ဖြစ်နိုင်သတင်းအချက်အလက်အများကြီးကိုဖမ်းယူလိမ့်မည်.
သငျသညျကိုပြတင်းပေါက်ပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ကို filter နိုင်.
ထိုမှတ်တမ်းများ View. အနည်းငယ်တွေကတော့ keylogger သင့်အီးမေးလ်ဖို့မှတ်တမ်းများပေးပို့ပါလိမ့်မယ်.
အခြားသူများကဆော့ဖ်ဝဲအပေါ်ပြေးသောကို PC ကနေသူတို့ကိုတင်ပို့ဖို့သင်တောင်းမည်.
သင်ပစ်မှတ်ရဲ့ Gmail ကို password ကိုဖြစ်ဖို့သံသယအဘယျသို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်အထိမှတ်တမ်းများမှတဆင့်ကြည့်ရှုပါ.
ထို keylogger ကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်သင်သစ်လုံးပို့မပါဘူးဆိုရင်, သင်က install လုပ်ကို PC ပေါ်မှာ Gmail ကို Hack Tool ကိုဆော့ဖ်ဝဲကိုဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်.
Gmail အကောင့် hack ဖို့အတွက်အခြားသောလမ်း Phishing ကနေတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်.
Phishing နေဖြင့်ဂျီမေးလ် Password ကို Hack ဖို့ကိုဘယ်လို?
မှာ Gmail password hack ဖို့အတွက်အခြားသောလမ်း Phishing အားဖွငျ့ဖွစျသညျ. ဒါဟာအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူများကိုသာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်နည်းနည်းလှည်လမ်းဖွင့်. phishing ထိုကဲ့သို့သောစကားဝှက်များအဖြစ်အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်အကျဉ်းချထားရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, username နဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်အသေးစိတျ.
ရိုးရှင်းစွာအများသောအားဖြင့် Phishing တစ် spoofed ဂျီမေးလ်စာမျက်နှာ၏အသုံးပြုမှုပါဝင်သည် (သို့မဟုတ်အတု Gmail ကို website မှာ) အဘယ်သူ၏ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအသုံးပြုသူဒီအတုဂျီမေးလ်စာမျက်နှာကနေဝငျရောကျဖို့ကြိုးစားပါတယ်တရားဝင် Gmail ကို website.When ၏နီးပါးတူညီသည်နှင့်အမျိုးအစားများ၎င်းတို့၏ password ကို, ရဲ့ login information ရဲ့ဟက်ကာများကခိုး ယူ. နေကြတယ်.
phishing ထိုကဲ့သို့သောစကားဝှက်တွေအဖြစ်သူတစ်ဦးဦးရဲ့အထိခိုက်မခံသတင်းအချက်အလက်အကျဉ်းချထားရန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, username နဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်အသေးစိတျ. ဒီနည်းပညာများသောအားဖြင့်တစ်ဦး spoofed ဂျီမေးလ်စာမျက်နှာ၏အသုံးပြုမှုကိုလည်းပါဝင်သည်တစ်ခုသို့မဟုတ်အတုဂျီမေးလ်က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်စွက်ဖက် .whose တရားဝင် Gmail ကို website.When ၏နီးပါးဆင်တူသည်အသုံးပြုသူကဒီအတုဂျီမေးလ်စာမျက်နှာနှင့်အမျိုးအစားများအနေဖြင့်မိမိတို့၏စကားဝှက်ကို log ဖို့ကြိုးစားပါတယ်, ရဲ့ login information ရဲ့ဟက်ကာများကခိုး ယူ. နေကြတယ်.
Gmail ကို Hack Tool ကို Gmail ကတစ်ခုအတုရဲ့ login page ကို Creating နှင့်စကားဝှက်ကိုအောင်မြင်စွာတစ်ခုလွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါစေအွန်လိုင်းကယူ. ဒါဟာ PHP ကိုတူ HTML နဲ့ scripting language တစ်ခု In-depth ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာတောင်းဆိုနေပြီ.
Gmail ကို Hacker က Tool ကိုအားဖြင့် Gmail ကို Password ကို Hack ဖို့ကိုဘယ်လို?
စိတျထဲမှာအားလုံးနည်းလမ်းများသည်ဤ Keeping နှင့်၎င်းတို့၏နည်းပညာဆိုင်ရာ aspects.Our အဖွဲ့သည်စဉ်းစားကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများက Gmail အကောင့်၎င်းတို့၏ password များပြန်လည်နာလန်ထူရန်အဘို့အထူးခြားတဲ့ software ကိုလုပ်မယ့်ခြေလှမ်းကိုယူ.
သင်အလွယ်တကူ Gmail ကို password ကိုဟက်ကာဆော့ဖ်ဝဲကို download လုပ်နိုင်ပြီးသင့်ရဲ့အကောင့်ကို software ကိုသိရသည် hacking Gmail ကိုပြန်လည်ကောင်းမွန်လာ တစ်ဦးတီထွင် တော်လှန်ရေး Gmail ကို password ကိုဟက်ကာများ၏ကမ်ဘာတှငျ. ကျနော်တို့မည်သူမဆိုအဘို့အဖြစ်နိုင်လုပ်, ဘယ်နေရာမှာမဆိုအလွယ်တကူပင် non-နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုသူက Gmail password များကို hack ဖို့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာ၌ထိုင်ဒီအခွင့်အလမ်းပေးသော်လည်းနိုင်.
သငျသညျကွာဒီအံ့ဩဘွယ်သောအဆော့ဖျဝဲရတဲ့ထံမှအနည်းငယ်ခြေလှမ်းများဖြစ်ကြောင်း. သင်ပြုသမျှအားလုံးသည် Gmail ကို password ကို Hacker တစ်ယောက်ကို download လုပ်ပါကသက်ဝင်စေရန်ဖြစ်ပါသည်. သင့်ရဲ့ဆော့ဖ်ဝဲကို activated ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့, အငြိမ့်ပြန်ထိုင်နှငျ့သငျဆော့ဖ်ဝဲပေါ်မှာရှိသမျှတင်းမာမှုစွန့်ခွာ.
ကျနော်တို့နောက်ထပ်နေဆဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏အသီးအသီးခြေလှမ်းတဆင့်အရာအားလုံး၏စောင့်ရှောက်မှုကြာသော်လည်းတစ်ဦးက Gmail password ကို hacking အတွက်ပါဝင်ရိပ်မိအခက်အခဲအားဖြင့်အကြောင်းကြားခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးဖို့ညွှန်ကြားချက် hacking ခြေလှမ်း Gmail ကိုအားဖြင့်အသေးစိတ်ခြေလှမ်းနှင့်အတူဒီဆော့ဖ်ဝဲကိုဖန်တီး.
Gmail ကို Hack Tool ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ပေးထားသည်ဤလွယ်ကူသောခြေလှမ်းကိုလိုက်နာပါ. အကြှနျုပျတို့သညျလှယျကူနှင့်အချိန်အကျိုးရှိစွာထုံးစံ၌ရည်မှန်းချက်များ hacking သင့်ဂျီမေးလ်အကောင့်အောင်မြင်ရန်လိမ့်မယ်အာမခံ.
လှမ်း 1: Gmail ကို Hack Download လုပ်
မှာ Gmail password ကိုရှာဖွေတာကိုစိတ်ဝင်စားမည်သူမဆိုယူရပါမယ်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း, မခွဲခြားဘဲကအကြောင်းတစ်ခုသာမေ့လျော့ Gmail ကို password ကိုပြန်လည်ထူထောင်င်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ Gmail account ကို hack ဖို့အတွက်လျှင်.
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏အရာရှိတဦး site ပေါ်တွင်ပေးထားသော download, ခလုတ်ပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Gmail ကို Password ကို Hacker က download လုပ်ရန်ရှိသည်. အဆိုပါ download, process ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်စက္ကန့်အတွင်းသင် download, တစ်ချိန်ကပြည့်စုံစစ်ဆေးမှုများသည်ဖြင့်သင့်ရဲ့ multitasking ကို software ကိုရလိမ့်မည်, ထို့နောက်ခြေလှမ်းမှဆက်လက်ဆောင်ရွက် 2.
လှမ်း 2: Gmail ကို Password ကို Hacker က Install
အဆိုပါဒေါင်းလုတ်ဆွဲ Gmail ကို Hack Tool ကို၏ installation file ကို double-click နှိပ်ပြီးပွညျ့စုံ၏နောက်မှာ, သင်ရုံ installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ဖို့ကို download.
အခုတော့ Follow ဆော့ဖ်ဝဲသူ့ဟာသူ you.Until ကိုလမ်းပြလိမ့်မယ် install လုပ်ရသောခြေလှမ်းတပ်ဆင်ခညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်လွယ်ကူသောခြေလှမ်းပြည့်စုံဖြစ်ပါသည်, ကွန်ပျူတာပိတ်မပစ်ပါ. ကအားလုံးကိုပြုသောအမှုဖွင်ပြီးတာနဲ့, သငျသညျ step မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင် 3.
လှမ်း 3: အဓိက Control Panel ကိုမိတ်ဆက်
Gmail ကို Password ကိုပြီးတဲ့နောက်, hacker အောင်မြင်စွာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်. အခုသင့်ရဲ့ desktop ပေါ်မှာဖန်တီးဖြတ်လမ်းပေါ်မှာသင့်ရဲ့ mouse ကိုအတူကို double-click. ဒါဟာ software ကိုစီရင်မည်, နှင့်၎င်း၏မူလတန်း interface ကိုသင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏လိမ့်မည်.
ဂျီမေးလ် hacking process ကိုစတင်လုပ်ဆောင်ဖို့, သင်ညွှန်လယ်သို့တိုက်ရိုက် input ကိုသငျသညျကို "Password ကို Recover" ခလုတ်ကိုအပေါ် hack နှင့်ကို click ရန်ဆန္ဒရှိအီးမေးလ်လိပ်စာရပါမည်. အဆိုပါ Gmail ကို password ကိုဟက်ကာ process ကိုစတင်နေပြီ!
လှမ်း 4: Gmail ကို Hack ပြီးအစီးဖြစ်ပါသည်
မိနစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏ပစ်မှတ် Gmail အကောင့် password ကိုရနိုင်ပါလိမ့်မည်. ယခုတွင်သင်သည်တင်းမာမှုအခမဲ့အသုံးချနိုင်ပါတယ်.
အဆင့်မြင့်ဂျီမေးလ် Password ကို Hack Tool ကို၏အင်္ဂါရပ်များ
အသုံးပြုနည်းလြယ္ကူ: Gmail ကို password ကိုဟက်ကာဆော့ဖ်ဝဲအသုံးပြုရလွယ်ကူမယ့်အထူးဒီဇိုင်းဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်. တောင်မှသင်ယူခြင်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုသုံးစွဲဖို့ခဲယဉ်းသောအရာထိုကဲ့သို့သောဆော့ဖ်ဝဲလိုအပ်သည်. Gmail ကို Password ကို Hacker ကလွယ်ကူသော interface ကိုအတူနေသူများကဖန်တီးဒါကြောင့်ဖွင့်, အလိုရှိသော password ကိုအောင်မြင်စွာဆယ်ယူသည်အထိကြောင့်လည်းခြေလှမ်းဖြင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူခြေလှမ်းလမ်းညွှန်!
အစာရှောင်ခြင်းပြုပြင်: Gmail ကို password များကို hack ဖို့အတွက် tools တွေကိုသို့မဟုတ်နည်းလမ်းများ hacking Gmail ကိုအများစုကအီးမေးလ်အကောင့် hack ဖို့ရက်ပတ်လုံးလိုအပ်ပါတယ်. Gmail ကို Password ကို Hacker က software ကိုမိနစ်ထဲမှာ Gmail ကို password ကို crack နိုင်. ဒါဟာရှားရှားပါးပါး minutes.Very အတွင်းသင့်အကောင့်၏သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်အထူးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးကြောင့် 2or တူအချိန်ယူ3သာရှုပ်ထွေးတဲ့ကိစ္စများတွင်မိနစ်.
သင့်ရဲ့သီးသန့်လုံခြုံရေးကာကွယ်ပေးသည်: တစျခုမှာမကြာခဏလျစ်လျူရှုပေမယ့် Gmail ကို password ကိုဟက်ကာများ၏ဝေဖန်ရှုထောင့်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ Gmail ကို password ကို hacking စဉ်သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုဝှကျထားလျက်ရှိနေမည်ကြောင်းသေချာအောင်သည်. သို့သော် Gmail ကို Hack Tool ကိုအဆင့်မြင့်အီးမေးလ်ကဟက်ကာနည်းပညာမဆိုဤကဲ့သို့သောပြဿနာကျေးဇူးတင်စကားရှိသည်ပါဘူး. ဒါဟာသင့်ရဲ့အထောက်အထားဖြစ်ပါသည်သေချာ 100% အ 3rd ပါတီမှကာကွယ်နှင့်သင့် PC ကိုမှန်ကန်စေသည် secure.Moreover, ဒါကြောင့်ပိတ်မိသို့မဟုတ်ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့မှသင်၏အားလုံးအလုပ်လုပ်လြှို့ဝှကျနဲ့လုံလုံခြုံခြုံစောင့်ရှောက်.
ဒါဟာအခမဲ့င်: ဒါဟာကုန်ကျစရိတ်များအခမဲ့ဖွင့်, နှင့်မျှမတို့ hidden စွဲချက် ထိန်းသိမ်းထားကြသည်. ဂျီမေးလ် password ကိုဟက်ကာန်ဆောင်မှုအများစုဟာသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်ဟက်ကာဖြေရှင်းချက်များအတွက်ကြီးမားကျယ်ပြအခကြေးငွေ. ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကအစာရှောင်ခြင်း၏လိုအပ်ချက်အတွက်မည်သူမဆိုအခမဲ့ download ပြုလုပ်ရရှိနိုင်မယ့်အဘယ်ကြောင့် everyone.That ရဲ့ Gmail ကို Password ကို Hacker ကအလွယ်တကူမရရှိနိုင်စေရန်ဆုံးဖြတ်ထားပြီး, Gmail ကို password များကို hack ဖို့လွယ်ကူနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လမ်း!
Gmail ကို Password ကို Hacker ကိုသုံးပါရန်ကိုဘယ်လို?
button ကိုပေးသောအဆင့်မြင့်ဂျီမေးလ် password ကို Hacker တစ်ယောက် Download.
အဆိုပါထုတ်ယူ tool ကိုမှအ folder ကို Extract.
အဆင့်မြင့်ဂျီမေးလ် Password ကို Hacker က Crack ဖိုင်တွဲကိုဖွင့်ပါနှင့် asosetup.exe install
သင်၏ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပါ & software ကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည် directory ထဲတွင်အက်ဖိုင် paste.
Gmail ကို Hack Tool ကို Download လုပ်ပါ 15.4.1 – 100% လွယ်ကူသော Hacking အတွက်2မိနစ် 2018 [နောက်ဆုံး]
← အဆင့်မြင့် System ကို Optimizer v3.9.3636 Crack ကားမောင်းသူ Toolkit 8.5.1 လိုင်စင် Key ကို + 100% Full Version အလုပ်အဖွဲ့ Crack 2018 →
အဲရစ်	ဒီဇင်ဘာလ 13, 2016
အီဗလီန် Bang	ဒီဇင်ဘာလ 18, 2016
Awesome ကို, သိပ်ဤအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
အီဗလီန် Bang	ဒီဇင်ဘာလ 22, 2016
Floren	ဒီဇင်ဘာလ 23, 2016
အီဗလီန် Bang	ဒီဇင်ဘာလ 28, 2016
ဝိုး! ဤသည်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်😉 10/10
Livia Schacter	ဇန္နဝါရီလ 4, 2017
မင်္ဂလာပါ, ငါသည်သင်တို့၏ Gmail ကို Hack Tool ကိုဆီသို့ရောက် လာ. ,. ဒါဟာပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည်, အများကြီးကိုခံထိုက်သောသူခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ကတ္တီပါနီ Hob	ဇန္နဝါရီလ 5, 2017
Yoo! အဆိုပါ Gmail ကိုဟက်ကာမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်🙂